Global Voices teny Malagasy » Afrika Atsimo: Adihevitra momba vuvuzela amin’ny mondial · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Jona 2010 10:24 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Atsimo, Fanatanjahantena
Angamba azo hamaritana ny endriky ny fifaninanana fiadiana ny amboara erantany 2010 ny firentirentin'ny kianja vaovao sy ny karazam-pitafiana marevaka anaovan'ny mpanohana ny ekipam-pirenena 32 mifaninana. Tsy misy fisalasalana kosa fa ny feo mampiavaka ity fifaninana ity dia ny feon'ny vuvuzela , izay henon'ny mpijery any an-kianja na amin'ny fahitalavitra. Niteraka adihevitra na tokony hanampy na tokony hoesorina amin'ny tontolon'ny mondial ny feon'ity vuvuzela ity.
Efa adihevitra  izy ity nandritra ny Amboaran'ny Confederations 2009  notontosaina tany Afrika Atsimo ihany ho an'ny mpijery baolina manerantany izay tratran'ny feony. Misy ny sasany izay niantso ny handrarana ny fampisana azy any an-kianja satria hoe manimba ny firavoravoan'ny lalao. Nanohana tanteraka ny hampiasana azy mandritra ny mondial 2010 kosa anefa ny filohan'ny FIFA Atoa Sepp Blatter. Nolazainy fa, “tsy tsy tokony eoropeanizentsika kosa ny mondial Afrikana. “
Ankehitriny kosa, andro vitsy nanombohan'ny fifaninanana dia lasa adihevitra an-tserasera indray izy io ho an'ireo izay mitaraina ny aminy , sy ho an'ireo miaro ilay zavamaneno eny fa na ireo mitsikera ny mimenomenona amin'ity vuvuzela ity aza. Na dia misy aza ny tatitra milaza fa mety hijery ny amin'ny fifehezana ny fampiasana vuvuzela noho ny fitarainan'ny televiziona  aza ny FIFA dia tsapan'ny maro fa mbola hitohy ihany ny fampiasana io zavamaneno io.
Ny mpisioka an-tserasera Syriana (twitter) Anas Qtiesh moa dia mampitaha ny feon'izy ity amin'ny feon'andiam-bibikely ka nanoratra hoe  “mila aringana (amin'ny entona ny bibikely) eny an-kianja, efa tsy voafehy intsony ny fipariaky ny tantely.” Maro moa ny kaonty Twitter no mandrisika ny fitarainana momba ity vuvuzela ity: @stopvuvuzela , @vuvuneela , ary ny @vuvunee. 
Misy koa ny hafa kinga amin'ny fiarovana ny nentim-pahazaran'ny baolona fandaka any Afrika Atsimo . Manoratra i Michelle Sibanda (@pinkminx36) :
Mampihomehy ny hafa kosa ny fitsikerana ny feon'ny vuvuzela ka nanome fanazavana ny fitarainan'izy ireo. Daniel Reeders (@onekind) nametraka :
Farany, Karabo Harry (@kayrabH) no manolo-kevitra ao anatin'izany rehetra izany :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/06/16/6615/
 Amboaran'ny Confederations 2009: http://en.wikipedia.org/wiki/2009_FIFA_Confederations_Cup
 tsy tsy tokony eoropeanizentsika kosa ny mondial Afrikana.: http://soccernet.espn.go.com/news/story?id=656178&sec=global&cc=5739
 ho an'ireo izay mitaraina ny aminy: http://www.antivuvuzela.org/
 mety hijery ny amin'ny fifehezana ny fampiasana vuvuzela noho ny fitarainan'ny televiziona: http://www.guardian.co.uk/football/2010/jun/13/world-cup-vuvuzela-ban-tv-complaints
 moa dia mampitaha ny feon'izy ity amin'ny feon'andiam-bibikely ka nanoratra hoe: http://twitter.com/anasqtiesh/status/16070063455
 kinga amin'ny fiarovana ny nentim-pahazaran'ny baolona fandaka any Afrika Atsimo: http://twitter.com/PinkMinx36/statuses/15933258826
 no manolo-kevitra ao anatin'izany rehetra izany: http://twitter.com/kayrabH/statuses/15860096582